Puerto Rico iyo Jasiiradaha Virgin, gebi ahaanba burburay ka dib marinkii duufaantii Maria | Saadaasha Shabakadda
Duufaantii Maria waxaa lagu xasuusan doonaa inay tahay mid ka mid ah xilliyadii ugu burburka badnaa xilli ciyaareedkan. Irma ka dib, waxa ugu fiican waxay noqon laheyd in duufaan dambe aysan sameysmin, maadaama waxyeelada ay geysatay ay ahayd mid aad u xun. Laakiin, ugu yaraan xilligan, ifafaalaha cimilada lama xakamayn karo.
Sidaa darteed, duufaanta kulaylaha way sii xoogeysan kartaa, waana wax ay si isa soo taraysa u awoodaan inay dhaqso u qabtaan maxaa yeelay heerkulka badaha oo keli ah ayaa kordha. Marka, Maria nasiib daro, waxay awood u yeelatay inay sii wado dhibaatooyinka badan ee ku dhaca jasiiradaha Badda Kariibiyaanka, gaar ahaan Puerto Rico iyo Virgin Islands.
1 Khasaaraha Puerto Rico
2 Burbur ku yimid jasiiradaha Virgin
3 Xagee u socotaa hada
Khasaaraha Puerto Rico
Sawir - Hector Retamal / AFP
Duufaanta Maria waxyeelladeeda Puerto Rico. Sawir - Carlos García / Reuters
Duufaanta Maria, oo hadda ku sugan xeebta waqooyi ee Jamhuuriyadda Dominican, ayaa waxyeello weyn geysatay. Iyada oo dabaylokeedu yahay 250 kiilomitir saacaddiiba, waxay si macno leh u xaaqday wax kasta oo jidkeeda ku jiray. Khasaaraha maadiga ayaa aad u weynaa, sida uu sheegay duqa magaalada xeebta leh ee Catañi, "waxay qaadan doontaa bilooyin, bilo badan ka hor inta aan ka soo kaban lahayn tan."
Sawirada iyo fiidiyowyada ka imanaya halkaas waa riwaayado: geedaha waa la rujiyey, guryo waa la burburiyey, dhul go ', waddooyin ay daadsan yihiin qashin… Weli shalay, Khamiis, Sebtember 21, jasiiraddu waxay sii waday feejignaanta daadadka.
Burbur ku yimid jasiiradaha Virgin
Jasiiradaha Virgin Islands ayaan fiicnayn. María dadkii deganaa waxay ka tagtay koronto la’aan, waddooyinkiina waxay noqdeen kuwa aan la mari karin. Ilaa 70% dhismooyinka ku yaal Santa Cruz, oo ah magaalo ay ku nool yihiin 55.000, ayaa lagu qiyaasaa inay waxyeelo soo gaadhay.
Labada dhulalba, Puerto Rico iyo Virgin Islands labadaba, aagag musiibo ayaa lagu dhawaaqay Aqalka Cad. Duufaanta waxay sababtay ugu yaraan 34 qof, 15 waxay ku dhinteen Puerto Rico, 15 waxay ku dhinteen Dominica, saddex waxay ku dhinteen Haiti, midna Guadeloupe.
Xagee u socotaa hada
Los Vientos de María, hadda waa duufaan 3aad ah, Waxay garaaci karaan Bahamas galabta. In kasta oo ay sii xoogaysan karto maalmaha soo socda, haddana aad bay u yar tahay in ay waligeed taaban doonto xeebaha Mareykanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Puerto Rico iyo Jasiiradaha Virgin, gebi ahaanba waa la burburiyey ka dib marinkii Hurricane Maria